လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကားအဘယ်နည်း။ | Martech Zone
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုတာဘာလဲ။ ငါသိတာကအခြေခံအကျဆုံးမေးခွန်းလိုအသံထွက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီကိစ္စဟာတကယ်ကိုထိုက်တန်တယ်။ ကြီးမားသောလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာနှင့်အကြောင်းအရာ၊ ရှာဖွေမှု၊ အီးမေးလ်နှင့်မိုဘိုင်းတို့ကဲ့သို့သောအခြားရုပ်သံလိုင်းမဟာဗျူဟာများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟူသောရှုထောင့်များစွာရှိသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုတေသနပြုခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊ Social media သည်အသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်၊ အကြောင်းအရာမျှဝေရန် (သို့) လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ဆက်သွယ်နိုင်သောကြားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်မီဒီယာတစ်ခုအနေဖြင့်ရိုးရာမီဒီယာနှင့်အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာလှုပ်ရှားမှုသည်များသောအားဖြင့်အများပြည်သူနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သုတေသနပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာအလတ်စားသည်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်မျိုးလုံးဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူမှုမီဒီယာသုံးစွဲသူပေါင်း ၃.၇၈ ဘီလီယံရှိပြီးထိုအရေအတွက်သည်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဆက်လက်၍ ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ ၎င်းသည် ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသည် လက်ရှိကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ.
Social Media Marketing ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ခိုင်မာသောဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာသည်လူမှုမီဒီယာ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်ပြီးအမှတ်တံဆိပ်အားစောင့်ကြည့်။ ရာထူးတိုးမြှင့်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်နေ့လျှင် tweets ၂ ခုကိုတွန်းအားပေးရန်မဟာဗျူဟာတစ်ခုရှိခြင်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာအပြည့်အဝမလွှမ်းခြုံနိုင်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောမဟာဗျူဟာတွင်ကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များပါ ၀ င်သည်။
စျေးကွက်သုတေသန - ပိုမိုကောင်းမွန်သောသုတေသနပြုရန်နှင့်သင်၏ပရိသတ်နှင့်နားလည်မှုရှိရန်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း။
လူမှုရေးနားထောင်ခြင်း - ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသို့မဟုတ်အရောင်းတောင်းဆိုမှုများအပါအ ၀ င်ပရိသတ်မှတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှုများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ခြင်း။
ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ဝြေခင်းများအပါအ ၀ င်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဂုဏ်သတင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်း။
လူမှုရေးထုတ်ဝေရေး - အစီအစဉ်များ၊ အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်အတွက်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအတွက်သိသင့်သိထိုက်သောတန်ဖိုးများကိုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှု၊ ထောက်ခံစာများ၊ အတွေးခေါင်းဆောင်မှု၊ ထုတ်ကုန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊
လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ - ၀ ယ်သူများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားသြဇာသက်ရောက်သူများ၊
လူမှုရေးမြှင့်တင်ရေး - ကြော်ငြာ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများအပါအ ၀ င်စီးပွားရေးရလဒ်များကိုမောင်းနှင်စေသောမြှင့်တင်ရေးနည်းဗျူဟာများ။ သင်၏မြှင့်တင်ရေးကိုသူတို့၏ကွန်ယက်များသို့တိုးချဲ့ရန်သြဇာရှိသူကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ငှားရမ်းခြင်းအထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
စီးပွားရေးရလဒ်များသည်အမြဲတမ်းအမှန်တကယ်ဝယ်ယူရန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အသိပညာ၊ ယုံကြည်မှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူမှုကိုမောင်းနှင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမား ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှတစ်ဆင့်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးအတွက်အတော်အတန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
လူမှုမီဒီယာကိုနှုတ်ဖြင့်ရှာဖွေခြင်း၊ သုတေသနအတွက်ဆွေးနွေးခြင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုနှင့်လူများမှတစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကနှစ်ဖက်စလုံးကတခြားစျေးကွက်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့တော်တော်လေးထူးခြားတယ်။
လူမှုမီဒီယာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်သည့်အတွေ့အကြုံရှိသည့်စားသုံးသူများ၏ ၇၁% သည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုသူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအားအကြံပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကြည့်ရှုခြင်း Martech Zoneလူမှုမီဒီယာစာရင်းအင်းအချက်အလက်များ
ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်ထုတ်ကုန်များကိုသုတေသနပြုရန်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုသည်။
စျေးကွက်သုတေသန - ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်သော ၀ တ်စုံထုတ်လုပ်သူနှင့်ယခုတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်။ ထိပ်တန်းပြိုင်ဘက်များအကြောင်းပြောသောအခါစားသုံးသူများအဓိကပစ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများကိုဖော်ထုတ်ရန်လူမှုဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထိုဝေါဟာရကိုကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအားထုတ်မှုများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
လူမှုရေးနားထောင်ခြင်း - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ကျွန်ုပ်၏သတိပေးချက်များကိုတပ်ဆင်ထားပြီးကျွန်ုပ်၏ဖော်ပြချက်များကိုအွန်လိုင်းတွင်တွေ့မြင်။ ၎င်းတို့အားတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ လူတိုင်းကအမှတ်တံဆိပ်တခုကိုတံဆိပ်ကပ်ထားတာမို့နားထောင်တာကအရေးကြီးတယ်။
ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှု - ကျွန်ုပ်နှင့်အလုပ်လုပ်နေသောဒေသခံကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အလိုအလျောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်တောင်းဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ထားသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတိုင်းကိုစုဆောင်းပြီးပြန်လည်ဖြေကြားသည်။ ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များကသူတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်ဝေမျှရန်တွန်းအားပေးသည်။ ဤအရာသည်ဒေသခံရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ပိုမိုမြင်သာမြင်သာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
လူမှုရေးထုတ်ဝေရေး - ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်များကိုစီမံသောကုမ္ပဏီများစွာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည် Agorapulse (ငါသံအမတ်ကြီးပေါ့) ၎င်းသည်၎င်းတို့အားအချိန်များစွာသက်သာစေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အလယ်အလတ်တန်းစားတိုင်းကိုတိုက်ရိုက်စီမံရန်မလိုပါ။ ကျနော်တို့ထည့်သွင်း စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး UTM တံဆိပ်ကပ်ခြင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာကအသွားအလာကိုဘယ်လိုမောင်းနှင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့ site ကိုပြန်ပြောင်းတာကိုငါတို့မြင်နိုင်တယ်။
လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ LinkedIn တွင်ကျွန်ုပ်ကိုငှားရမ်းနိုင်သောသြဇာရှိသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ခွဲခြားသိမြင်ရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကူညီသည့်ပလက်ဖောင်းကိုကျွန်ုပ်တက်ကြွစွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြောရေးဆိုခွင့်အလမ်းများအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားကိုတိုးပွားစေသည်။
လူမှုရေးမြှင့်တင်ရေး - ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အများစုသည်ဖြစ်ရပ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်လူမှုမီဒီယာကြော်ငြာများကိုထည့်သွင်းကြသည်။ ဤကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောနည်းလမ်းများနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်မီဒီယာများပါ ၀ င်သောရှုပ်ထွေးသောလူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ငါကသူတို့ကွဲပြားခြားနားအသုံးပွုနိုငျဘယ်လိုအချို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးဖို့နတ်ဝိဇ္ဇာအသီးအသီး၏အချို့သောယေဘုယျအသုံးပြုမှုကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာပါ။
များစွာသောစျေးကွက်သမားများသည်အအေးဆုံးအလတ်စားသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မည့်လမ်းကြောင်းသို့ဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်နတ်ဝင်သည်များအားအပြည့်အ ၀ အသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပျက်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြသပါ - အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်နှုတ်ဖြင့်ပြောသောစကားသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိသည်။ တိကျသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိလူများသည်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းများနှင့်အုပ်စုများတွင်စုဝေးကြသည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမျှဝေပါက၎င်းကိုအလွန်အမင်းစေ့စပ်ထားသည့်ပရိသတ်မှမြင်တွေ့နိုင်မည်။
သစ္စာစောင့်သောအသိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပါ အကယ်၍ သင့်တွင်ပရိသတ်ကိုတန်ဖိုးထားရန်ထိရောက်သောလူမှုမဟာဗျူဟာတစ်ခုရှိပါကတိုက်ရိုက်အကူအညီ၊ ပြင်ဆင်ထားသောအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်အခြားသတင်းများ၊ အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များဖြင့်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်သင့်အားတန်ဖိုးထားလေးစားရန်သင့်အားတိုးပွားလိမ့်မည်။ ယုံကြည်မှုနှင့်အာဏာသည်ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန် - သင့်ဖောက်သည်ကသင့်ကိုအကူအညီတောင်းသောအခါ၊ ၁: ၁ စကားပြောဆိုမှုဖြစ်သည်။ ၀ ယ်ယူသူတစ် ဦး သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာသို့ရောက်ရှိသောအခါသင်၏ပရိသတ်များကသင်တို့၏တုံ့ပြန်ပုံနှင့်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုမြင်လာသည်။ ဂရိတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှသံယောင် လိုက်၍ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိတွေ့မှုတိုးမြှင့် - ဘာကြောင့်ထုတ်ကုန်မှာဗျူဟာမရှိဘဲဝေမျှပြီးမြှင့်တင်မလဲ။ အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမဆိုလိုပါ သင်တည်ဆောက်လျှင်သူတို့သည်လာကြလိမ့်မည်။ သူတို့မလုပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံအားပေးသူတွေဖြစ်လာတဲ့လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားကြီးတယ်။
အသွားအလာနှင့် SEO တိုးမြှင့် - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် link များ၊ ပရိသတ်များနှင့်နောက်လိုက်များအားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်တွင်တိုက်ရိုက်အချက်အဖြစ်ဖယ်ထုတ်နေသော်လည်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာသည်အလွန်ကောင်းသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များကိုမောင်းနှင်ပေးလိမ့်မည်.
ရောင်းအားတိုးချဲ့နှင့်ပရိသတ်အသစ်သို့ရောက်ရှိ - ဒါသက်သေပြခဲ့သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုပေါင်းစပ်ထားသောအရောင်းလူများ မကျင့်သောသူတို့အား။ ထို့အပြင်သင်၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများသည်နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်မကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုနားလည်ကြသည်။ သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနမကြာခဏမထားဘူး။ သင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအားလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းတစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်နေရာချခြင်းသည်သင်၏လက်လှမ်းမီမှုကိုတိုးချဲ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချပါ - ၎င်းသည်အရှိန်အဟုန်လိုအပ်သော်လည်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်အောက်ပါအတိုင်းတိုးတက်မှု၊ အစုရှယ်ယာနှင့်ကလစ်များအတွက်ဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ ထူးခြားသောဆိုရှယ်မီဒီယာတည်ရှိမှုကိုတည်ဆောက်ပြီးနောက်တည်ဆောက်ခြင်းမှတိုးချဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားသောပုံပြင်များရှိသည်။ ၎င်းသည်များစွာသောကော်ပိုရေးရှင်းယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဆန့်ကျင်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြောက်လန့်ပြီးသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းတီးနေတဲ့ကုမ္ပဏီများလည်းရှိသည်။
စားသုံးသူ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်သြဇာညောင်းသောအကြံပြုချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အားအသိပေးသည်။
ယင်းတို့အနက်တစ်ခုချင်းစီတွင်သင်၏ဖောက်သည်များ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအပြင်၎င်းတို့ကိုဖောက်သည်များခရီးတစ်လျှောက်တွင်ပင်ရောင်းအားတက်စေရန်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားလူမှုမီဒီယာတိုင်းတွင်အပြည့်အ ၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တွန်းအားမပေးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များကသူတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးအွန်လိုင်းနောက်လိုက်များနှင့်အတူတန်ဖိုးများကိုတည်ဆောက်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ရသည်ကိုတွေ့သည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုသုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုပြissueနာကိုစီမံခန့်ခွဲပါကဆိုရှယ်မီဒီယာ၏စွမ်းအားကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည်အမှတ်တံဆိပ်၏အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင်၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်သို့ရောက်ရှိရန်နှင့်အချိန်မီတုန့်ပြန်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်ကိရိယာများနှင့်မဟာဗျူဟာများထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
Tags: Facebook ကFacebook ကိုစျေးကွက်linkedin စျေးကွက်စျေးကွက်သုတေသနအွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းPinterestဂုဏ်သရေဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုreviewsလူမှုရေးနားထောင်ခြင်းလူမှုမီဒီယာကြော်ငြာဆိုရှယ်မီဒီယာရည်ရွယ်ချက်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်လူမှုမီဒီယာမြှင့်တင်ရေးလူမှုမီဒီယာဂုဏ်သတင်းလူမှုရေးကွန်ရက်လူမှုရေးမြှင့်တင်ရေးလူမှုရေးထုတ်ဝေTikTokyoutube စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ဇန်နဝါရီ 6, 2009 မှာ 7: 38 AM
ငါပိုပြီးသဘောတူနိုင်ဘူး, ငါဂီတသမားမှငါ့ဗီဒီယိုကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတီတစ်ခုမှာဖြစ်ဖို့အသုံးပြု! ပြီးတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားခဲ့ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်မရှိကြဘူး၊ သူတို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေပြီးငါ့ site ကိုရှာပြီးငါ့အလုပ်ကိုအချိန်အကြာကြီးသုံးပြီးမကြိုက်ကြဘူး။ အခုဖောက်သည်တွေကငါ့ကိုဆက်သွယ်ကြတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသောဗီဒီယိုအနေနှင့်၊ indexible word များအတွက်ရေးသားချက်များကိုသာရေးသားခြင်းသည်ပိုကောင်းသလားသို့မဟုတ် vlogging သည်ကောင်းမွန်သောအကြံဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်သလား။
ဇန်နဝါရီ 6, 2009 မှာ 8: 09 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှာဖွေနိုင်သောဝေါဟာရများကိုဖော်ပြရန်ဗွီဒီယိုဖြင့်ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်ထဲတွင်အောင်မြင်မှုရဆဲဖြစ်သည်။ လူနည်းစုမှလူများသည်ဗွီဒီယိုရှာဖွေခြင်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ ထိုသူများအတွင်း၌များစွာသောသူတို့သည်ဗီဒီယိုကိုစနစ်တကျဖော်ပြရန်အချိန်မယူကြပါ။
နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အစွမ်းထက်သော်လည်းအနည်းငယ်ကြာမြင့်သည်။ ဗွီဒီယိုဘလော့ဂ် (Podcastable) ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဗွီဒီယိုတခုစီရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုတွေ့ရှိခြင်းကသင့်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအခွင့်အလမ်းကိုပိုကောင်းစေလိမ့်မယ်။
ဇန်နဝါရီ 7, 2009 မှာ 12: 29 AM
Doug ဂရိတ် post ။ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်လူမှုကွန်ယက်များကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် spam များသာမကဘဲစျေးပေါသော spam များလည်းပါတတ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောချဉ်းကပ်မှုသည်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ယူပါ (ဘလော့ဂ်သည်အလွန်ရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်)၊ ကျွမ်းကျင်မှုကိုဖန်တီးရန်၊ သင်၏အလုပ်အကိုင်တွင်သင်၏ထူးချွန်မှုကိုပြရန်နှင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုအနိုင်ယူရန်ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ 7, 2009 မှာ 7: 42 AM
Doug ဤသည်ကြီးစွာသောပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်အတန်ကွဲပြားခြားနားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးကိုတိုးတက်စေရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေသည်။ လူမှုမီဒီယာကိုအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေတောင်မှသတိရသင့်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားထင်မြင်ချက်တွေအများကြီးရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။